Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » 2022 Ezona zixeko zinesisa eMelika
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Iqela lebaseball ayisiyiyo yodwa into engcwele kwiTwin Cities. IMinneapolis neSt. Paul, eMinnesota, ngokwenene zinentsingiselo yelithi “ummelwane.”
Njengoko singena kwixesha lokupha - ukubulela nokunceda abo basweleyo - uninzi lwethu luyasebenza kwaye lufumana ngaphezulu, kodwa ubhubhane uyaqhubeka nokwenza nzima ubomi kwizigidi zabantu baseMelika.
Enyanisweni, “malunga nezigidi ezingama-20 abantu abadala abahlala kumakhaya angafumani kutya kwaneleyo” yaye “abantu abadala abali-12 lezigidi basasemva ngerente,” ngokutsho kweCenter on Budget and Policy Priorities.
Ngombulelo, abaninzi abantu baseMelika bayenyuka ukuze bancede abo basweleyo.
Kodwa zeziphi ezona zixeko zininzi zika-2022?
Abahlalutyi bathelekisa i-130 lezona zixeko zikhulu zase-US kuzo zonke izalathi ezili-13 eziphambili zokuziphatha kobubele, ukusuka kwisisa ukuya kumaxabiso okuvolontiya ukuya kwinani leebhanki zokutya - nkqu nenani labantu abaguqule indlela yabo yokuphila. Ithala leencwadi elincinane lasimahla kwibhokisi yokwabelana ngokutya kubamelwane abalambileyo.
Bona izixeko ze-20 zifikelela kwezona nzulu kwiintliziyo zabo kunye neepokotho ezingezantsi.
2022 Ezona zixeko zinesisa
9 IVancouver, WA
16 I-Salt Lake City, UT
17 ESan Francisco, CA
Awona Mawele angazicingeliyo: Iqela lebaseball ayisiyiyo yodwa into engcwele kwiTwin Cities. IMinneapolis neSt. Paul, eMinnesota, ngokwenene zinentsingiselo yelithi “ummelwane.” IMinneapolis yahlala kwindawo yokuqala xa iyonke kwaye kudidi lweSisa soMntu ngamnye, ngelixa iSt.
Akunjalo kuphela abahlali bezi zixeko abanikela kakhulu ngexesha labo (zombini iNombolo ye-1 yezinga lokuvolontiya), kodwa baqinisekisa ukuba bakhonza amalungu oluntu alambileyo ngokutya okushushu. I-Minneapolis ibeka iNombolo yesi-6 kunye ne-St. Baphinde babeka iNombolo yesi-8 kunye neNombolo ye-3, ngokulandelanayo, ekwabelaneni ngeendawo zebhokisi apho abantu basekuhlaleni bamisela abamelwane babo abangenakho ukutya ngexesha lobhubhane.
UMnumzana Rogers ngewayenosuku oluhle kwezi ndawo.
Izixeko ezikhulu, iiMfuno ezinkulu:
Izixeko ezikhulu ngokubanzi ziqhube ngcono kuluhlu kunezixeko ezincinci neziphakathi.
Kungenxa yokuba izixeko ezikhulu zidla ngokugxila ekwandiseni impembelelo yazo edibeneyo ngaphezu kwegalelo lazo. Ngapha koko, izixeko ezithathu ezikhulu zaseMelika, Inew york, Chicago, kunye neLos Angeles ngokolandelelwano, yayilawula iMetrics yethu yeSisa soLuntu. IHouston, iSan Francisco, kunye neWashington, DC, nazo zibekwe kwi-10 ephezulu kolu didi.
Ngokunyuka kokungalingani kwezoqoqosho, ezi zixeko zikhulu zibonisa ukuba isisa sithanda ukuhluma apho sifuneka kakhulu.
I-Florida Falls ngasecaleni leNdlela:
IFlorida ithumele izixeko ezine ukuya kuthi ga kwi-10 esezantsi, kubandakanya i-Hialeah kwindawo yokugqibela iyonke. I-Jacksonville (iNombolo ye-45) kunye ne-Orlando (iNombolo ye-58) zizixeko ezibini ze-Sunshine State eziqhekeza isiqingatha esiphezulu.
Kudidi lweSisa soMntu ngamnye, izixeko ezininzi zaseFlorida zibotshelelwe kwindawo yokugqibela kwiimetriki ezine kwezintandathu kwaye zasinda ngokulambisa kwindawo yokugqibela kwezinye ezimbini. Ukusebenza kwabo kwiSisa soLuntu kwakungekho ngcono, kananjalo. Inani leendawo zokuhlala zezilwanyana yayiyeyona metric kuphela kwezisixhenxe zizonke apho isixeko saseFlorida singazange sibekwe kwindawo esezantsi ye-10 okanye sibophe kwindawo yokugqibela.
Ukuba uwe kumaxesha anzima, musa ukuya kwizixeko ezininzi zeSunshine State ufuna uncedo-kodwa qiniseka ukuba abahlobo bakho abanemilenze emine baya kufumana ikhaya.